पाटनबाट चोरी भएको ३७ वर्षपछि लक्ष्मी-नारायणको मूर्ति अमेरिकाद्वारा नेपाललाई फिर्ता
काठमाडौं। आजभन्दा ३७ वर्ष अगाडि चोरी भएको एक मूर्ति नेपालले फिर्ता पाएको छ। नेपालबाट चोरी गरेर अमेरिकास्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा राखिएको लक्ष्मी-नारायणको मूर्ति फिर्ता पाएको हो।
त्यसका लागि अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी कूटनीतिक सेवाअन्तर्गतको विदेश अपराध अनुसन्धान हेर्ने कार्यालय, नेपाल प्रहरी, अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्यूरो (एफबीआई र डल्लास म्यूजियम अफ आर्टबीच लामो समय संयुक्त अनुसन्धान भएको थियो।
वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त मूर्ति नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले उक्त मूर्ति बुझेका छन्। कार्यक्रममा राजदूत खतिवडासँगै एफबीआई तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त अवसरमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपाली संस्कृति, धर्म र इतिहासमा अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्ने अन्य वस्तुहरूलाई पनि नेपाल फर्काउन सहकार्य गर्ने बताए।
राजदूत बेरीले भने, “नेपाली संस्कृति, धर्म र इतिहासमा अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्ने अन्य वस्तुहरूलाई नेपाल फर्काउन अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य गर्नेछ। अन्य सरकार, संग्रहालय र संकलकहरूले पनि यस्तै गर्नेछन भन्ने मलाई आशा छ।”
उक्त मूर्ति सन् १९८४ मा पाटनबाट चोरी गरी अमेरिका पुर्‍याइएको थियो। वासुदेव-कमलाजा भनिने लक्ष्मी-नारायणको उक्त कास्य मूर्ति १२ औँ र १५ औँ शताब्दी बीचको पुरातात्त्विक सम्पदा रहेको जनाइएको छ। लक्ष्मी-नारायण मूर्ति फिर्ता ल्याउने खर्च ललितपुर महानगरपालिकाले व्यहोर्ने भएको छ।
पाटनबाट चोरिएको र एक वर्षअघि अमेरिकाको ‘डल्लास म्युजियम अफ आर्ट’मा भेटिएको लक्ष्मी-नारायण (वासुदेव-कमलाजा) मूर्ति फिर्ता ल्याउन लाग्ने खर्च ललितपुर महानगरले व्यहोर्ने भएको हो।
जीवनशैली अपराध अन्तर्राष्ट्रिय
प्रकाशित: शनिबार, फागुन २२, २०७७ १६:४७
नेपाल ल्याउन आवश्यक पर्ने खर्च ललितपुर महानगरले व्यहोर्ने भएको छ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडालाई मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो।